ရှိနှင့်ပြီးသား တံခါးဝများ | ZAYYA
← စာမကွဲသော်လည်း ဖတ်နည်းကွဲက – အသိကွဲ၏
~ ဘယ ကင်းမှ ဘဝ သည် သက်ဝင် ၏ ~ →
Osho: အသိ ဉာဏ် အလင်း ဘယ် အချိန် မှာ ဖြစ်ပါ သလဲ ဆိုရင် – ဆရာသခင် ရော တပည့် ဖြစ်သူ ပါ ဘာမှ မလုပ်တော့ တဲ့ အချိန် မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတိအကျ ထပ်ပြောပါမယ် – အသိ ဉာဏ် အလင်း ဟာ ခင်ဗျား ဘာဆို ဘာမှ မလုပ်တော့တဲ့ အချိန်မှ သာ ဖြစ်တည် တယ်။ အပြည့် အဝ ငြိမ်ဝပ် သွားချိန်မှသာ အသိဉာဏ် အလင်း ပေါ်ပေါက် ပါတယ်။ ဘာလို့ဆို – ချမ်းမြေ့မှု၊ ကြည်စင် မှု၊ (ဝါ) ဉာဏ် အလင်း ဟာ မိမိ ကိုယ်ပိုင် ကိုယ်ဆိုင် လုပ်ကိုင် ဖန်တီး လို့ မရတဲ့ အရာ တစ်ခု မို့လို့ပဲ။ အသိဉာဏ် အလင်း ရရှိဖို့ အတွက် တစ်ခုတည်း ရှိနေရ မယ့် အခြေ အနေဟာ- “မိမိ ကိုယ် ကို၊ မိမိ သန္တာန်ကို အပွင့်လင်း ဆုံး ဖွင့်ဟ ထားဖို့” သာ ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒါလေး ပဲ။
မိမိ သဘောနဲ့ အခြား ဘယ်အရာတွေများ လုပ်ကိုင်လို့ ရပါသလဲ။ ချမ်းမြေ့မှု ရလိုဇောနဲ့ – မိမိ ဆန္ဒ အလျောက် ဘယ်အရာကို ဖန်တီး တည်ဆောက် နိုင်သလဲ။ စင်စစ် ချမ်းမြေ့မှု ဟာ သူ့သဘောနဲ့ သူ သာ စီးမျော ဝင်လာ တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှိရှိ သမျှ လောကဓာတ် တစ်ခု လုံးဟာ — (ခင်ဗျား သာ ဖွင့်ဟ ထားနိုင်ပါစေ) — ချမ်းမြေ့မှု သန္တိ ရသကို မိမိ သန္တာန် ထဲ အလို အလျောက် ဖြည့်တင်း ပေး သွား ပါ လိမ့် မယ်။
အများ အားဖြင့် – ကျနော်တို့ ခင်ဗျား တို့မှာ အပိတ်ချည်းသာ ဖြစ်နေလေ့ ရှိတယ်။ တစ်ခုခု ကို ရဖို့ – မိမိဆန္ဒ နဲ့ လုပ်ကိုင်ဖို့ – ကြိုးစား တယ်။ မိမိလိုအင်ဆန္ဒ ဖြည့်တင်းမှု များလေ – တံခါးဝကို ပိုပြီး ပိတ်ဆို့ထားလေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့သည် အကျင့်ဝသီ အတိုင်း – ကြိုးစား ရင်း မာန်ခဲ လေ – မိမိ သန္တာန် ကို မိမိ ဘာသာ ပိတ် ဆို့ ပြီးသား ဖြစ်လေပဲ။ ကြိုးစား လုပ်ကိုင်ရင်း ဖြစ်တည် လာသမျှ – အားလုံး ဟာ အဲ့အချိန် မှာ- မိမိ အတ္တ အထည် ကိုယ် ကြီးထွား လာအောင်သာ ပံ့ပိုး ပေးတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်လာ တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခင်ဗျား ဘယ်အရာ ဖန်တီး ဖန်တီး – ခင်ဗျား အတ္တ အတွက် ချည်းပဲ ရှိနေတော့တယ်။
မိမိ ကိုယ်ကိုယ် မိမိ – တစ်စုံတစ်ခု လုပ်နေတယ်၊ ကြိုးစားနေတယ် လို့ မှတ်ယူမယ် ဆိုပါစို့။ အရာ နှစ်ခု မလွဲမသွေ ကြုံဆုံရ ပါတယ်။
ပထမ တစ်ခုက – ခင်ဗျား ဘာလုပ်လုပ် – လုပ်သမျှဟာ – “ငါလုပ်နေတယ်” ဆိုတဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ အတ္တ အတွက် ဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယ က – ခင်ဗျား လုပ်နေတဲ့ အရာ ကို “ရှေ့အနာဂတ် တစ်ချိန်ချိန် အထိ ဆွဲဆန့် သွား” တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့ အနာဂတ် ဆိုတာ- တစ် စက္ကန့် လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ တစ် မိနစ်၊ တစ်နာရီ လည်း ဖြစ်နိုင် သလို၊ သားစဉ်မြေးဆက် တစ်ဘဝ စာလုံး၊ တစ်သံသရာ လုံး လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
အဓိက က – အခု လက်ရှိ အချိန် တည့်တည့် အပေါ် ခင်ဗျားရဲ့ အသိသက်သက် – ငြိမ်ဝပ်ပြီး မရှိနေ နိုင် တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ခဏ အပေါ် မှာ ငြိမ်ဝပ် မနေနိုင် တာနဲ့ တစ်ဆက်တည်း – ရှေ့ကို (ဝါ) အနာဂတ်ကို – ဆက်လက် မျှော်မှန်း နေမိရက်သား ဖြစ်လာတယ်။ ဒီ ပထမ နဲ့ ဒုတိယ အရာနှစ်ခု စလုံး ဟာ – ဒီလိုနည်းနဲ့ – ချမ်းမြေ့ မှု၊ အသိဉာဏ် အလင်း ကို ခင်ဗျားသန္တာန်ထဲ စီးမျှော ခွင့် မပေးဘူး။ အပြည့် အဝ ပိတ်ပင် တားဆီ ထားပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အဓိက နားလည်ရမယ့် အရာဟာ — တစ်ခုတည်း လို့ ဆိုပါမယ်။ – “You must be here and now” ဒီနေရာ၊ ဒီအချိန် မှာ – ခင်ဗျား အပြည့် အဝ ရှိနေရုံလေး ပဲ။ လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ အချိန်၊ လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ နေရာ မှာ ခင်ဗျား သန္တာန်ကို အပြည့်အဝ ဖွင့်ဟ ထားရုံလေး ပဲ လိုပါတယ် ။ အဲ့ဒီ အခါ – ချမ်းမြေ့ မှု၊ ကြည်စင် မှု သန္တိ ဟာ အလိုအလျောက် စီးဆင်း လာပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ “Here and Now” မှာ ရှိနေ ပါလျက်နဲ့ – ခင်ဗျား သန္တာန် ငြိမ်ဝပ် မနေပါဘူး ဆိုရင် – ခင်ဗျား တစ်စုံ တစ်ခု ကို မျှော်လင့်နေဆဲ၊ လုပ်ကိုင် နေ ဆဲ ဖြစ်နေ လို့၊ (ဝါ) လက်ရှိ “Here and Now” ပစ္စုပ္ပန် ခဏ အပေါ် အသိ အပြည့်အဝ ရှိမနေသေးလို့ ပဲ။
တကယ်လို့ – မရရကောင်းလား ဆိုတဲ့ လိုအင် နဲ့ ပိုပြီး မာန်တင်း တဲ့အခါ -ခင်ဗျား ပိုပြီး လွဲချော် သွားဖို့ သာ ရှိပါတယ်။
စင်စစ် ချမ်းမြေ့မှုဟာ အစဉ်အမြဲ စီးဆင်းလျက် ရှိနေတယ်။ အနီးအပါးမှာ – အဆင်သင့် ရှိနေပြီး သား ရယ်။ အခုခဏ-ဒီနေရာမှာတင် – ခင်ဗျား သန္တာန်မှာ တင်ကျန် နေပြီး သား ရှိပါတယ်။ မိမိ အနေ နဲ့ – တံခါးဖွင့်ပေးဖို့ လေးပဲ လိုတယ်။ ဒါပေမယ့် အများအားဖြင့် – တံခါးတွေ ကို လုံးဝ ပိတ်ထား ကြတာ သာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိသန္တာန် အတွင်း မိမိ ဘာသာ အကျဉ်းကျ တယ်။ မိမိ အာရုံ အတွင်း မိမိ ဘာသာ နစ်မွန်းနေ မယ်။ ဒီအချိန် – ဒီနေရာ ကို မကြည့်အားဘူး -(ဝါ) လက်ရှိ တည့်တည့် မှာ မနေနိုင်ဘူး – ရှေ့အနာဂတ်ကို မျှော်မယ်။ ဒါမှ မဟုတ် – အတိတ် ကို ပြန်တွေး ရင်း ဆွေး မယ်။ ဒါဟာ အများစု ရှိနေကြတဲ့ ပုံစံ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အကြောင်းကြောင့် အများစုမှာ ချမ်းမြေ့ မနေနိုင်ဘဲ – ပူလောင်မှုနဲ့သာ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေ ကြရတယ်။ စင်စစ် အဲ့ဒီ – “အခု တစ်ခဏ တာ” အပေါ် ကောင်းကောင်း အသိ မရှိခြင်း ကိုယ်၌က – တံခါး အားလုံး ပိတ်ပင် ထားတာ ဖြစ် ပါတယ်။
အများစု က (ဝါ) ဘာသာရေး သမားတွေက – မိမိ စိတ်သန္တာန် အေးချမ်းနိုင်ဖို့ – ဘာဝနာ လုပ်ကြပါ ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ တိုက်တွန်းလေ့ ရှိတယ်။ အများစုကလည်း ဘာဝနာ ဟာ ချမ်းမြေ့မှု ကို ဖြစ်ပေါ်စေ တဲ့ လက်နက် တစ်ခုပဲလို့ ထင်မှတ်လေ့ ရှိတယ်။ စင်စစ် – ဘာဝနာ က မိမိ သန္တာန်ကို အေးချမ်း သွားစေ တာ၊ ချမ်းမြေ့ သွားစေ တာ မဟုတ်ဘူး -။ အေးချမ်းမှု၊ ချမ်းမြေ့မှု အတွက် ဖောက်လုပ်ပေး ရာ လမ်း သာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဘာဝနာရဲ့ အလုပ်က- မိမိ ရဲ့ သန္တာန်အတွင်း အဲ့ဒီ တံခါးပေါက်တွေ ဖွင့်ဟပေး ဖို့သာ စွမ်းဆောင်ပေးတယ်။ သူတို့က – ခင်ဗျား တံခါးကို ဆွဲဖွင့် ပေးမယ် – ခင်ဗျား တံခါး ရှေ့မှာ ခုခံနေတဲ့- အလေးအပင် ပစ္စည်းပစ္စယ အမှိုက် သရိုက် မှန်သမျှ ရှင်းလင်း ထုတ်ပစ် ဖို့ အပြည့် အဝ တာဝန် ယူထား တယ်။
အဲ့ဒီ အခါ – ချမ်းမြေ့မှု ဟာ သူ့အလိုအလျောက် ခင်ဗျား သန္တာန်ထဲ ဖြည့်တင်းပြီးသား၊ စီးဝင် လာပြီးသား ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
Note: Grace has been flowing always, that is already the case. It is there right now, flowing around you, but you don’t giveadoor to it. All your windows are closed, all your doors are closed; you are closed, imprisoned in yourself, you don’t allow any winds to blow. These meditations we are doing are just to help you to drop all doing.
~ Vedanta: Seven Steps to Samadhi
June 18th 2012 at 8:00 AM
Filed under Osho Tagged with grace, Osho